Apple dia namoaka dokam-barotra roa vaovao ho an'ny Apple Watch Series 2, matoky fa hanampy azy ireo ny ombiasy ary hifanaraka bebe kokoa.
Ny Cupertino tech goliath dia mety hahatonga ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny tolotra iPhone goavana azy tamin'ity taona ity noho ny fahatongavan'ireto iPhone 7 iPhone sy 7 Plus vao haingana azy ireo miaraka amin'ny fakantsary roa, na izany aza, amin'ny alàlan'ny kaonty rehetra dia mandeha amin'ny zava-drehetra mba hitondra ny smartwatch deals manangana sy manara-maso ny fifosana amin'ny fifosana fa tsy fantatra araka ny filazan'ny fikambanana.
Hatramin'ny tara, ny tolotra amin'ny smartwatches rehetra - tsy ny Apple ihany - dia nihoatra ny 50 isan-jato. Ny fandaharana vaovao vaovao napetrak'i Apple tamin'ny famoahana ny zoma dia ny "Apple Watch Series 2" ho "endriky ny endri-pandaminana".
Ny horonan-tsary 10-amin'ny 16-faharoa dia ahitana ny toerana misy an'i Los Angeles sy Asia, trano famoriam-bidy ary kôperativa ivelan'ny baolina. Ny fampiroboroboana koa dia mifantoka amin'ny famoahana tsy manam-paharoa ny zavatra, miaraka amin'ny mpanolotra azy io ho toy ny fitahiana - manolotra fa ho tonga amin'izao fotoana izao ny fanomezana an-tsitrapo amin'ny vanim-potoan'ny Krismasy!
Mashable no antoka fa mitondra fiara ao amin'ny show smartwatch ny Apple Watch, na izany aza, ny fikambanana dia nolavina ny hamoaka ny tarehimarika azo antoka ho an'ny gadget, ka mahatonga ny fisalasalana maro ho azy.
Na izany aza, i Tim Cook, CEO Tim Cook, dia nanamafy tamin'ny alàlan'ny mailaka ho an'ny Reuters fa ny "fampahalalany" dia mampiseho fa manao zavatra tsy mahazatra i Apple Watch, ary toa tsy mahagaga eo anivon'ireo fanomezana faran'izay ratsy indrindra tamin'ity taona ity. "
"Ny fivoaran'ny fifanakalozana dia tsy eo amin'ny grafika. Voalaza fa, tao anatin'ny herinandro voalohany amin'ny tsena Krismasy, ny soso-kevitsika tamin'ny Apple Watch dia nalaza kokoa noho ny herinandro tao amin'ny tantara. Ankoatr'izay, araka ny efa nantenainay, izahay dia manaraka ny loka tsara indrindra amin'ny Apple Watch, "hoy i Cook.